10 Zvikonzero Nei Big Dhata Ruzivo Ruchidikanwa Iawa - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big data iri zvishoma nezvishoma ichipinda mukati meese tekinoroji kubva kuzvimiririra mota kuenda kuAI kuenda IoT (Indaneti yezvinhu), nemasangano ari kuenderera mberi nekudyara zvakanyanya mukati Big Dhata Kuongorora. Asi, muchiitiko chekuti iwe unoshandisa zvisina chinangwa kuvaka hwaro nekutenga maturusi, usina kunyatso kufunga maitiro ekuwana Big Data nzwisiso, panguva iyoyo, zvinongo gadzirisa kukuvara kupfuura kubatsirwa kwebhizinesi rako.
Heano gumi zviratidzo zvinonyatsoratidza kana iwe uchida rubatsiro nazvo inivhesitimendi muBig Data uye Analytics kuyedza kuti uwane yakavimbiswa mhedzisiro uye kukosha kwesangano rako:
Ndidzo mhando dzemibvunzo vatengi vako yavanofanira kupindura. Nekudyara mune analytics, unogona kuvapa simba rekukwevera iro ruzivo kumusoro mumasekondi.
Pasina mukana wekuiongorora, vatengi vako havagone kuchinjisa yavo yega ruzivo. Uyezve, yako software sangano rinorasikirwa nemukana wekutora mukana wekuita mari pasina chishandiso chekuongorora uye neBI.
Unoda rumwe ruzivo paBig Data? Wobva wabata yako kopi yemahara ipo pano.
Tsika yechokwadi inotungamirwa nedata inobvumidza vatungamiriri vese kukurumidza uye zvinobudirira kunhonga zvido zvavo. Ipo uchigadzira mushumo uchitora maminetsi makumi matanhatu chete (kana mashoma), yako analytics venture inogona zvechokwadi kutanga kuita mibairo mikuru.
Paunenge uchingogara uchikumbira kuti yako IT dhivhizheni ishandure uye ichinje mishumo, izvi zvinogona kukurudzira kurambidzwa nekurembedzwa kwenguva refu mukupedzisa basa. Ichi chiratidzo chisinga tsanangurike kuti uyu mukana wakanaka wekutumira iyo data kune vanhuwo zvavo vanonyatsowana mukana kubva mukuferefeta iyo data kuzadzisa zvinangwa zvebhizinesi: vatengi vebhizinesi.
Masangano akadzivirira zvinhu uye mari, anofunga kuti zvakachipa kupa makuru data zvibvumirano, kunyanya padanho rakakura. Nekudaro, ivo vanofanirwa kutsvaga matsva ekugadzira zvirongwa, semuenzaniso, metadata-inotyaira nzira dzisingangodzikise mutengo izvozvi, mukuwedzera, kudzikamisa njodzi.
Iwo akanyanya kuvandudza ekutengesa analytics masystem anopa akasarudzika madhibhodhi nemishumo inosimbisa mafirita etsika, hierarchies, uye kugona kugona kudzidziswa kubva mukati meiyo mushumo. Chaizvoizvo, kubata pane imwe tsananguro, metric, kana pateni kunogona kununura iwo maonerwo aunoda kuti ufambe kuenda kumberi.
Dhata haisi iyo chete nhamba mune dhatabhesi. Zvemukati, odhiyo, uye vhidhiyo zvinyorwa zvinogona zvakare kupa ruzivo runobatsira; maturusi akafanira anogona kunyange kuona mamwe maratidziro achitarisa zvirevo zvakafanotaurwa. Zvizhinji izvi zvinoitika nekushandisa hunhu hwekubata mitauro, izvo zvinogona kuratidza zvakakosha kunyora mameseji, mutauro wekiriniki, manzwiro ongororo, uye zita zita kutevedzera kunoedza.
Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvakakosha masangano anoda kuisa zviwanikwa muBI. Iine ruzivo rwakawanda rwakaunganidzwa nemasangano, inouya iyo njodzi yekutyora ruzivo uko iro bhizinesi data risingabatsiri pakurwisa. Kuongorora kwedhata kunogona kugonesa makambani kuchengetedza data rawo kubva kunjodzi dzekunze. Semuenzaniso, kudzoreredza uye kuongorora maitiro algorithms inogonesa masangano kuziva chero mhando yekufungidzira mashandiro kana zvingangoita kusawirirana.
Kambani yega yega ine imwe nhanho yekuwanika uye chinodiwa che analytics. Nekudaro, ese masangano anofanirwa kuenda kunokurudzira kukurudzira kubva kune yavo mari Paunofunga kuisa mari mune hombe dhata nzwisiso maturusi, ita shuwa kuti kambani yako inogadzirira chirongwa chayo cheBI uye inotora chishandiso chinokodzera bhizinesi rako nhasi uye mune ramangwana. . Gadzirira kusimudza nyika, tanga zvishoma, uye ramba uchienderera kune dzimwe nzvimbo dzebhizinesi.
Une chirongwa cheBig Data mumusoro wako? Wobva wasvika kwatiri kuti ubvunze.